प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्नः यति, ओम्नी लगायत ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन गर्न कसले रोकेको हो ? – हिमालयन ट्रिबुन
प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्नः यति, ओम्नी लगायत ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन गर्न कसले रोकेको हो ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय छानविन गर्न कसले रोकेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् । ६५ औं प्रहरी दिवसमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भनेपछि उनले ट्वीट गर्दै यस्तो बताएका हुन् । भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रम केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य शहनशीलता हो भने बूढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रेस, यति, ओम्नी लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानविन गर्न कसले रोकेको हो ? कुराले हैन काम गरेर देखाउनोस् ! नत्र ढाँटको कुरा खाई पत्याउनु…!
प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईले गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई गलत सूचनाका साथ भड्काउन खोजेको बताए । प्रधानमन्त्रीले निर्णय नै नभएको र कसले बनाउँछ भनेर टुंगो नै नलागेको आयोजनामा यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा रहेको बताए । भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब खाएको र त्यसको प्रमाण आफूसँग रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।